जिम्मेवारीको नवीकरण ~ brazesh
June 03, 2010 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
विश्वविख्यात् साहित्यकार जर्ज बर्नाड शा सधँै पुराना किताबहरू बेच्ने ठाउँमा गएर आधा मोलमा किन्थे रे ! एक दिन त्यस्तै पसलमा गएको बेला त्यहाँ उनले आफ्नो एउटा किताब पनि आधा मोलमा बेच्न राखेको देखेछन् । कौतूहलवश त्यो किताब लिएर पल्टाउँदा उनले थाहा पाए, त्यो उनले आफ्नो एक जना मित्रलाई उपहार दिएको किताब पो रहेछ । पहिलो पानामा उनले आफ्नो मित्रलाई शुभकामनासहित भनेर दस्तखत पनि गरेका थिए । उनले त्यो किताब किनेर लगेछन् अनि पहिलो शुभकामनाको मुनि 'शुभकामनाको नवीकरणसहित' भनेर फेर िदस्तखत गरेर त्यही मित्रलाई पठाइदिएछन् ।
हामी पनि अहिले कुनै पुरानो पसलमा छौँ । हामीले जसलाई जे जिम्मेवारी दिएका थियौँ, तिनले त्यसलाई ल्याएर यही पुरानो पसलमा अलपत्र पारेर गएका छन् । अब हामीसँग त्यही विकल्प मात्र बाँकी छ त ? फेर ित्यसलाई त्यहीँ नै पठाउने अनि मुन्तिर लेख्ने, 'जिम्मेवारीको नवीकरणसहित' । जोडिएपछि मुठ्ठी बन्छ, बलियो हुन्छ, होइन भने एकापसमा नमिलेका एक्लालाई औँंला भन्छन् र त्यो कमजोर हुन्छ भन्ने सामान्य कुरासमेत भुलेर किन हाम्रा अगुवाहरू एकापसमा जोरी मात्र खोजेर समय बर्बाद गररिहेका हुन् भन्ने कुरा नबुझेर हामी हतास भइसकेका छौँ । अझै पनि समय बाँकी नभएको होइन । तपाईंहरूलाई त्यहाँ पुर्‍याउनका लागि कति नागरकिले आफ्नो के के गुमाएका छन् भनेर एकपटक सोच्नूस्, एकपटक जुटेकोे अनुभव पनि गरेर हेर्नूस्, हामीले चाहेको निकास हामीलाई दिनूस् । यो मुलुक र हामी जनता तपाईंहरूप्रति आभारी हुनेछौँ